विकास बैङ्किङमा हाम्रा आफ्नै मोडल छन् | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता विकास बैङ्किङमा हाम्रा आफ्नै मोडल छन्
अन्तरवार्ता 96 views
प्रद्युमन पोखरेल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, मुक्तिनाथ विकास बैङ्क
मूलरूपमा लघुवित्त बैङ्कको अवधारणा अपनाएर दूरदराजसम्म वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन सफल मुक्तिनाथ विकास बैङ्कले मर्जर तथा एक्विजिशन नगरी हकप्रद र बोनसमार्फत चुक्तापूँजीको न्यूनतम सीमा पुर्‍याइसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नयाँ नियमका कारण सो बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भरतराज ढकालले हालै सो पद छोडेपछि गत चैत २ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकले प्रद्युमन पोखरेललाई नियुक्त गर्‍यो । बैङ्किङ क्षेत्रमै करीब २७ वर्षको अनुभव सँगालिसकेका उनी डेपुटी सीईओबाट सीईओ भएका हुन् । प्रस्तुत छ, नवनियुक्त सीईओ पोखरेलसँग उनका योजना र यस बैङ्कका विविध पक्षबारे आर्थिक अभियानका ममता थापाले गरेको कुराकानीको सार :
आफैले साढे २ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापूँजी पुर्‍याउन सफल भएको बैङ्क हो यो । राष्ट्र बैङ्कमार्फत चुक्तापूँजीसम्बन्धी निर्देशन आएपछि विकास बैङ्कमध्ये आफैले चुक्तापूँजी पुर्‍याउने यो पहिलो बैङ्क हो । २० प्रतिशत बोनस शेयर निष्कासन गरेपछि अहिले नेप्सेमा सूचीकृत भइसकेको छ । गत साता मात्र सूचीकृत भएपछि यो बैङ्कको चुक्तापूँजी तोकिएकोभन्दा ९ करोड बढी छ । अझ रिजर्भ हेर्ने हो भने कोर क्यापिटल ३ अर्बको हाराहारीमा पुग्छ । गएको १ वर्षमा हाम्रो ब्यालेन्स सीटको आकार ४८ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।
यो बैङ्कले अन्यले भन्दा फरक तरीका र मोडलअनुसार काम गरिरहेको छ । केही व्याख्या गरिदिनुहोस् न ?
अहिलेसम्म हामीले तीन किसिमको मोडलमा काम गरिरहेका छौं । ती हुन्– मोडर्न बैङ्किङ, माइक्रोफाइनान्स र रुरल बैङ्किङ । देश आर्थिक विकासको मार्गमा द्रुतगतिमा अगाडि बढिरहेको अवस्थामा हामीले हाम्रो आर्थिक वृद्धि र विकासलाई पनि त्यहीअनुरूप अगाडि बढाउनुपर्छ । हामीले काम गर्‍यौं भने नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पनि विश्वास गर्छ । र, तपाईंहरू विकास बैङ्क भएर राम्रो काम गरिरहनुभएको छ, अब तपाईंहरू कमर्शियल बैङ्कका लागि पनि योग्य हुनुहुन्छ भनेर भन्न सक्छ । यसका लागि हामीले पूँजी बढाउँदै काम पनि त्यहीअनुसार देखाउनुपर्छ । कमर्शियल बैङ्कलाई चाहिने रू. ८ अर्ब हो । हाम्रो अहिले रू. २ अर्ब ५९ करोड पूँजी छ । यतिले मात्र नपुग्ने भएकाले पूँजी बढाउनुपर्छ । ५ वर्षमा बिजनेशसँगै पूँजी पनि बढाउँदै जाने लक्ष्य छ । सो लक्ष्य प्राप्तिका लागि काम गर्ने तरीका पनि नयाँ ढङ्गले अघि बढाउँछौं ।
हामीले कस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्ने, स्रोत परिचालन कसरी गर्ने भन्नेबारे रणनीति बनाउनुपर्छ । स्रोतका लागि व्यक्तिगत ग्राहकमाथि केन्द्रित हुँदै हामी व्यक्तिगत निक्षेपमा बढी जोड दिन्छौं । त्यसका लागि बैङ्कका शाखा सञ्जाल पनि विस्तार गर्नुपर्छ । देश सङ्घीयताको मोडलमा गएको हुनाले अब सातओटै प्रदेशमा काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यहाँ गएर साधारण काम गरेर हुँदैन । हामी स्थानीय तह र ग्राहकलाई लाभ हुनेगरी काम गर्न चाहन्छौं । त्यसका लागि जहाँ वित्तीय सम्भाव्यता छ तर, वित्तीय पहुँच कम छ, त्यस्ता ठाउँमा व्यवसाय विस्तार गर्छाैं ।
साथै, हाम्रा तीनओटा मोडल पनि परिमार्जन गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नु आवश्यक छ । अहिलेसम्म लघुवित्तमा समूहगत रूपमा लगानी गरेका छौं । भविष्यमा उक्त समूहलाई सहकारीको रूपमा विस्तार गर्ने योजना छ ।
लघुवित्त समूहहरूलाई कृषि सहकारी संस्थामा रूपान्तरण गर्ने योजना कुन चरणमा पुगेको छ ?
हामीले ११ वर्षदेखि यो काम गर्दै आएका छौं । अब मोडललाई नयाँ ढाँचाले परिमार्जन गरी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । मोडल परिमार्जन सीधै गरेर पनि हुँदैन । विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ । हामी यसको प्रक्रियामा छौं र केही ठाउँमा पाइलट टेष्टिङ पनि गरिसकेका छौं । तर, सहकारी दर्ता गरेर काम नै शुरू गरेको अवस्था छैन ।
हाम्रो ट्रान्सफर्मेशन मोडल छ । त्यसमा प्रविधिको पनि सहायता लिन्छौं । त्यसलाई पनि अगाडि बढाएर लैजान्छौं । प्रतिस्पर्धी हुनुप¥यो । बजारमा हामी मात्र छैनौं, अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्था पनि छन् । यसका लागि प्रभावकारिता, दक्ष जनशक्ति, प्रक्रिया, प्रविधिलगायतमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
उत्पादित वस्तु बजारसम्म पुर्‍याउन छुट्टै ठूलो कम्पनी स्थापना गर्ने भनिएको थियो । यसबारे के भइरहेको छ ?
यो उत्कृष्ट अवधारणा हो । किसानले उत्पादन गरेको सामान बजारमा प्रत्यक्ष अथवा खुद्रारूपमा विक्री हुन्छ । मुक्तिनाथ विकास बैङ्कले किसानलाई सहकारीमार्फत अथवा सीधै वित्तीय सहायता (फाइनान्स) गर्छ । अब हाम्रो बैङ्क पनि संस्थापक भएका कम्पनीहरूले किसानका उत्पादन उनीहरूसँग खरीद गरेर बजारमा वितरण गर्ने सोचाइ हो । यसो भएमा किसानलाई बजारको समस्या हुँदैन र उनीहरूको उत्पादनले उचित मूल्य पाउँछ । साथै, ग्राहकले पनि सुपथ मूल्यमा किनमेल गर्न पाउँछन् । हामी त्यो अवधारणामा काम गर्ने तयारीमा छौं ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्राथमिकता क्षेत्रमा अनिवार्य कर्जा प्रवाह गर्न न्यूनतम सीमा तोकिदिएको छ । यो बैङ्कको स्थिति के छ ?
विपन्न वर्गमा ५ प्रतिशत लगानी गर्छौं । कुल लगानीको ३० प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा छ । बैङ्कमा १ सय रुपैयाँ कसैले खातामा राख्यो भने त्यसबाट हामी ८० रुपैयाँ लगानी गर्न सक्छौं । त्यो ८० मा ३० रुपैयाँ ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी हुने गरेको छ । साधारण मानिसको जीवनस्तर सुधार्न यसबाट ठूलो टेवा पुगेको छ । विपन्न वर्ग क्षेत्रमा राष्ट्र बैङ्कको नियम आफ्नो ठाउँमा छ । तर, हाम्रो ३० प्रतिशत एक्पोजर नै लघुवित्तमा छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा हामी राष्ट्र बैङ्कले तोकेकोभन्दा बढी सक्रिय छौं । यसैगरी पर्यटन र जलविद्युत्मा पनि लगानी गरेका छौं । जहाँ जहाँ देशको आवश्यकता छ, त्यहाँ लगानी गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
बैङ्कको दोस्रो त्रैमाससम्ममा निक्षेप ५२ प्रतिशत र कर्जा प्रवाह ४७ प्रतिशत बढेको छ । वाणिज्य बैङ्कहरूमा भने लगानीयोग्य रकम अभाव छ र कर्जा प्रवाह मागअनुसार गर्न नसकेको गुनासो छ । तपाईंहरू कसरी निक्षेपमा आकर्षण गरेर सीसीडीको अनुपातअनुसार कर्जा प्रवाह गरिरहन सक्नुभएको छ त ?
कमर्शियल बैङ्कमा ठूला निक्षेपकर्ताको मात्रा बढी हुन्छ, जुन विकास बैङ्कमा कम हुन्छ । हामीमा तरलता सङ्कुचनको अवस्था छैन । विकास बैङ्कमा ठूला निक्षेपकर्ता धेरै कम हुन्छन् । मुक्तिनाथका शाखा दुर्गम ठाउँहरूमा धेरै छन् । त्यहाँको स्थानीय अर्थतन्त्रले हामीलाई निक्षेपमा खासै समस्या आउन दिएको छैन, जसले गर्दा यो बैङ्कले लगानीयोग्य रकमकोे समस्या सामना गर्नुपरेको छैन ।
बैङ्कले वित्तीय साक्षरता अभियान कसरी अघि बढाइरहेको छ ?
हामीले २ वर्ष पहिलेदेखि वित्तीय जागरणमा धेरै काम गरेका छौं । स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्रमा काम गरेका छौं । वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रमबाट ३५ हजार व्यक्ति लाभान्वित भएका छन् । हामी गीत, सडक नाटक, पोष्टर–पम्पलेट, रेडियो कार्यक्रमको माध्यमबाट विद्यालयहरूमा वित्तीय साक्षरता बढाइरहेका छौं ।
युवाको सहभागी बढाउन उनीहरूलाई पनि केन्द्रित गरेका छौं । शीपमूलक तालीम दिएका छौं । खेती, उद्योगधन्दा, घरेलु उद्योग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा तालीम कार्यक्रम गरेका छौं । यस्ता तालीमपश्चात् व्यक्तिगत अथवा समूहगत रूपमा कर्जा पनि प्रदान गर्दै आएका छौं ।
जीर्ण अवस्थामा रहेका पाटीपौवा, मन्दिरलगायत सम्पदाको मर्मतसम्भार, वृद्धाश्रममा भएकाहरूलाई ह्वीलचियर सहयोगको काम पनि गरिरहेका छौं । निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर र बाग्मती सफाइ अभियानमा सहभागी भएका छौं । जहाँ जहाँ शाखा छ, त्यहाँको आवश्यकताअनुसार सामाजिक दृष्टिकोणबाट सहयोग गरेका छौं ।
राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कहरूको जोखीम व्यवस्थापनसम्बन्धी विश्लेषण गर्दै आएको छ । तपाईंहरूले आफ्नो जोखीम व्यवस्थापन कसरी गर्दै आउनुभएको छ ?
यो धेरै महत्त्वपूर्ण विषय हो । जोखीम हामीले लिनै हुँदैन भन्ने होइन । बैङ्कले पाउने जुन नाफा छ, त्यो सफल जोखीम व्यवस्थापनको नाफा हो । हामीले जोखीम त लिनुपर्छ । तर, जोखीमको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्छ । जोखीमबाट हुन सक्ने प्रभाव के छ, त्यसको अनुमान गरेर त्यसलाई घटाउन सक्ने पनि हुनुपर्छ ।
बैङ्कमा दुई किसिमको रिक्स हुन्छ, डेलिभरी रिक्स र ब्यालेन्स सीट रिक्स । डेलिभेरी रिक्स भनेका अपरेशन रिक्स, टेक्नोलोजी रिक्स, लिगल रिक्स, ह्याकिङका रिक्स आदि हुन् । ब्यालेन्स सीट रिक्समा मार्केट, लोन दिएर समयमा फिर्ता नहुने, बजारमा तरलता, घटबढको रिक्स र ब्याजको रिक्स पर्छन् ।
अहिले जोखीम व्यवस्थापन भनेर छुट्टै विभाग पनि छ, जसले यसमा मात्र काम गर्छ । यसका लागि फ्रेमवर्क तयार गरेर त्योअनुसार काम गरिरहेका छौं । यो समितिले रिपोर्ट गर्छ ।